election result(election result) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौको मेयरमा बालेन साहको जित लगभग पक्का
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको जित लगभग पक्का भएको छ। हालसम्मको मतगणनाअनुसार बालेनले ५४ हजार ७१८ मत ल्याएका छन्। उनले आफ्ना निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई २० हजार ११० मतले पछाडि पारेका छन्। सिंहले ३४ हजार ६०८ मत ल्याएकी छन्। काठमाण्डौ महानगरपालिकामा १ लाख ६८ हजार...
पोखराको मेयरमा धनराज आचार्य विजयी, उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङको जित
काठमाण्डौ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा सत्तारुढ गठबन्धनतर्फबाट नेपाक एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार धनराज आचार्य र उपमेयरमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ विजयी भएका छन्। आज बिहान सार्वजनिक गरिएको अन्तिम मतपरिणामअनुसार मेयरमा आचार्यले ५८ हजार ८९३ मतसहित विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका कृष्णबहादुर थापाले ५२...
बालेनले कटाए ५० हजार मत, सिर्जना र स्थापितको कति ?
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले ५० हजार मत कटाएका छन्। बिहान ११ः२० बजेसम्मको मतगणानाअनुसार बालेनले ५० हजार ४९२ मत प्राप्त गरेका छन्। उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पारेका छन्। हालसम्म १ लाख ५२ हजार ३०० मत गनिएको छ।...
विजय सरावगीलाई भारी मतले पछि पार्दै राजेशमान सिंह वीरगन्जको मेयरमा निर्वाचित
काठमाण्डौ । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेदवार राजेशमान सिंह विजयी भएका छन्। सिंह ४६ हजार २१५ मत ल्याउँदै मेयरमा विजयी भएका हुन्। उनले नेकपा एमाले–लोसपा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार विजयकुमार सरावगीलाई २२ हजार पाँच सय ४४ मतान्तरले पराजित गरेका छन्। सरावगीले जम्मा २३ हजार ६७१ मतमात्रै ल्याएका...
भरतपुरमा फराकिलो मतान्तरले रेणु दाहाल विजयी
काठमाण्डौ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा सत्ता गठबन्धनका तर्फ नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उम्मेदवार रेणु दाहाल फराकिलो मतान्तरले विजी भएकी छन्। दाहालले निकटम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई १२ हजार ४४९ मतान्तरले पछि पार्दै मेयरमा विजयी भएकी हुन्। दाहालले ५२ हजार ३० मत ल्याउँदा सुवेदीले ३९ हजार ५८१ मत...
निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिमा ४१ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका बढी
काठमाण्डौ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा हालसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबैभन्दा धेरै ४१ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको आधारमा विश्लेषण गर्दा उक्त उमेर समूहमा विभिन्न पदमा निर्विरोधसहित महिला र पुरुष गरी कूल १० हजार ९९० निर्वाचित भएका छन्। आयोगको प्रणालीमा २१ देखि ३०, ३१ देखि ४०,...
काठमाण्डौमा बालेनको फराकिलो अग्रता, स्थापित सिर्जनाभन्दा ९३८ मतले पछाडि
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले फराकिलो मतान्तरका साथ अग्रता लिइरहेका छन्। अहिलेसम्म १ लाख ३५ हजार ६९३ मत गनिएको छ। अब ३१ हजार ३०७ मत गन्न बाँकी छ। काठमाण्डौ महानगरमा १ लाख ६७ हजार मत खसेको थियो। अहिले वडा ९, १०, १३, १४, १५, २०, २१, २२ र २६ मा मत गणना जारी छ। अहिलेसम्मको मत परिणामअनुसार बालेनले...
हालसम्मको नतिजामा कति पालिकामा कसको जित, बाँकीमा क–कसको अग्रता ?
काठमाण्डौ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। पछिल्लो मतपरिणामअनुसार ७२७ वटा पालिकाको सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेसले हालसम्म १३२ मेयर र १८८ अध्यक्षसहित ३२० वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेर पहिलो स्थानमा छ। कांग्रेसले १०४ पालिकामा उपमेयर र १८९ पालिका उपाध्यक्षसहित कुल २९३ वटा पालिकाको...
बालेन ४४ हजार मतनजिक, सिर्जना र स्थापितको कति ?
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको मत ४४ हजारनजिक पुगेको छ। हालसम्मको मतगणनाअनुसार बालेनले ४३ हजार ८५० मतसहित अग्रता कायमै राखेका छन्। निकटतम प्रतिद्विन्द्वी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले २५ हजार ९४४ मत ल्याएकी छन् भने एमालेका केशव स्थापित २५ हजार ५९ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्।&nbs...
काठमाण्डौ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन्। साम्पाङ निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार किशोर राईलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पार्दै विजयी भएका हुन्। साम्पाङले २० हजार ८२१ मत पाएका छन्। राईले १६ हजार ५९ ल्याएका छन्। साम्पाङले राईभन्दा ४ हजार ७६२ मत बढी पाएका...
अहिलेसम्म ७०३ पालिकाको नतिजा सार्वजनिक, कसले कति स्थानीय तहमा जिते ?
काठमाण्डौ । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत ७०३ पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। अब ५० पालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म सार्वजनिक नतिजाबमोजिम नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक ३११ पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। जसअनुसार कांग्रेस प्रदेश १ मा ६४, मधेश प्रदेशमा ४४, बागमती प्रदेशमा ५६, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा ४४,...
बालेनले कटाए ३९ हजार मत, सिर्जना र स्थापितको कति ?
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह प्रतिद्वन्द्वीलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पार्दै अग्रता कायमै राखेका छन्। हालसम्म काठमाण्डौ महानगरपालिकामा १ लाख ९ हजार ५०० गनिसक्दा बालेन एक्लैले ३९ हजार ६ मत पाएका छन्। बालेनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले २२...
धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल विजयी, नृप वड पराजित
काठमाण्डौ । सत्ता गठबन्धनलाई हराउँदै कैलालीको धनगढी उपमहानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल विजयी भएका छन्। हमालले सत्ता गठबन्धनबाट मेयर उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान मेयर नृपबहादुर वडलाई हराएका हुन्। आँप चुनाव चिह्न पाएका हमालले २६ हजार ८६५ मत ल्याएका छन्। पराजित वडले जम्मा १४ हजार ८१७ मत...
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको पुरानो रेकर्ड तोडेको छ। हालसम्मको मत परिणामअनुसार कांग्रेसले एमालेको पुरानो रेकर्ड ब्रेक गर्दै सबै स्थानीय तहको मत गणना नसक्दै २९६ स्थानीय तह जितेको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिको मेयरमा ११२ र गाउँपालिका अध्यक्षमा १८४ पद जितेको...
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पार्दै अग्रता लिइरहेको छ। अहिलेसम्म काठमाण्डौका १, २, ३, ४, ५ र ३० वडाको मतगणना सकिइसकेको छ। हाल ६, ७, ८, २७, २८, २९, ३१ र ३२ वडाको मतगणना भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म ७० हजार ९६० मत गनिसकिएको छ। जसमा...